Iwo gumi mabasa eApple Watch ayo akakosha muzuva nezuva | Nhau dze iPhone
Mabasa epamberi eApple Watch anozivikanwa nevakawanda, asi kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvatingaite nazvo, sezviri pachena zvisina kukosha, asi izvo. pakupedzisira unoshandisa zvakanyanya kazhinji uye ivo vanokuitira zvinhu zvakawanda nyore kwauri. Aya ndiwo mabasa gumi andinoshandisa zvakanyanya paApple Watch yangu.
Isu hatisi kuzowana kuti Apple Watch inotarisisa sei maekisesaizi ako, kana kuti ingaite sei kuchengetedza hutano hwako nekuona zvisirizvo mutsindo yemwoyo, kutarisa kurara kana kuona kudonha. Iwo mabasa anoita kuti ive pamberi peakawanda smartwatches pamusika, izvo zvinogona kuita icho chinhu chinoshuvira vazhinji, uye kuti zvakanaka kuti ivo vanosanganisirwa. Nekudaro, ivo havawanzo kushandiswa zuva nezuva, uye pakupedzisira, vazhinji vanoshandisa Apple Watch kuona zviziviso, kuziva kuti mangani makiromita avakafamba kana kuziva tembiricha kunze. Zvisinei zviripo zvimwe zvinhu zvakawanda zvatinogona kuita newachi, uye kuti mumaitiro edu ezuva nezuva anogona kutibatsira zvakanyanya kupfuura mabasa anotora misoro yese.
Wanga uchiziva here kuti iwe unogona kudzora huwandu hwezvaunonzwa neApple Watch? Kana kuti iwe unogona kuwedzera zvinhu kune yekutenga rondedzero nekungounza kumuromo wako? Iwe unoziva here kuti unogona kuita kuti ikuudze nguva pane kuti utarise skrini? Uye kuti iwe unogona kumuka mangwanani nenzira inonakidza kupfuura neruzha runogumbura rwearamu wachi pa iPhone yako? Kune aya madiki mabasa, asingazivikanwi kune vakawanda, uye akawanda anosvika gumi, ndinokuratidza muvhidhiyo iyi uye zvirokwazvo inopfuura imwechete inobatsira zvakakwana kuisanganisira muTOP yako yemabasa eApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » TOP 10 Apple Watch inoshanda yehupenyu hwezuva nezuva